Sammubani, Author at Ibsaa Jireenyaa - Page 31 of 58
Uumama Namaatti Xinxallu-Kutaa 7
April 6, 2019 Sammubani Leave a comment
Namni jireenya keessatti sodaa fi gaddi akka isarraa deemu barbaada. Hanga fedhe qabeenyaa haa qabaatu, sadarka guddaa irraa haa jiraatu, imaanni qalbii keessa yoo hin jiraatin, gara hundaan sodaa fi gaddi isa haguuga. Qabeenyi isa jalaa yoo bade, garmalee gadda. Qabeenya yommuu argatu immoo na jalaa fudhatama ykn bada jechuun garmalee sodaata. Tasgabbii qalbii hin qabu. Kanaafu, namni akkamitti sodaa fi gadda kana ofirraa oofuun tasgabbii qalbii argachuu danda’a? Qabeenya yommuu dhabuu ni gadda, yoo argatuu immoo ni sodaata. Kanaafu, qabeenyi sodaa fi gadda isarraa oofu danda’aa? Dhugumatti qabeenyi qofti gaddaa fi sodaa oofuu hin danda’u. Furtuun sodaa fi gadda ofirraa ittiin oofan Rabbii olta’aatti amanuu fi Isaaf ajajamuudha. Kanaan alatti gonkumaa furmaanni biraa hin argamu. Qur’aana keessatti, “Isaannan amananii, iimaana isaanii zulmiin walitti hin makin isaaniif tasgabbiitu jira. Isaanis qajeelfamoodha.” Suuraa Al-An’aam, Ayah 82
Uumama Namaatti Xinxallu-Kutaa 6
March 30, 2019 Sammubani Leave a comment
Akkuma gabrichi Gooftaa Isaa beekuuf tarkaanfi fudhatuu fi Isaaf ajajamuun mi’aa iimaanaa dhandhamaa adeema. Akkuma iimaanaa dhandhamuun gammachuu fi tasgabbiin gara hundaan isa marsu. Gammachuu fi tasgabbiin iimaana irraa argamuu garmalee guddaa ta’uu irraa kan ka’e jecha ittiin ibsu hin qabu. Abbuma iimaana dhandhametu kana beeka. Akkuma gabrichi hiyyeessi fi dadhabaan gara Rabbii Dureessaa fi Jabaatti dhiyaatuun ulfaatinni, dhiphinni fi gadadoon jireenyaa hir’ataafi adeema. Garuu kana jechuun maallaqa fi qabeenya baay’ee ni argata jechuudhaa? Tarii argachuu danda’a. Haa ta’uu malee, wanta qabeenya caalu argata. Innis, tasgabbii fi gammachuu qalbiiti. Qabeenya addunyaa guutuu osoo walitti qabanii tasgabbii fi gammachuu kana bituuf tattaafatanii, gonkumaa bitu hin danda’an. Kanaafu, gabrichi akkuma Mawlaatti dhiyaatun wanta maallaqaan gonkumaa hin bitamne argata. Innis tasgabbii fi gammachuu namni hunduu dharra’uudha. Maal qaba Rabbii ofiitiif ajajamanii tasgabbii fi gammachuu tana osoo bitatanii. Gabayaan banaadha. Garuu gatii ishii kafaluu didan malee. Gatiin tasgabbii fi gammachuu, Rabbitti, Aakhiraatti fi hundeewwan iimaana hafanitti amanuu fi Isaaf ajajamuudha. Har’as uumama keenyatti xinxalluu itti haa fufnu. Kuni iimaana keenya dabaluun wanta guddaa jireenya keessatti dharraanu akka argannuu nu taasisa.
March 28, 2019 Sammubani Leave a comment
Erga Tawbatanii Booda Badii irraa of qusachuuf-kutaa 2ffaa
Kutaa darbe irraa itti fufuun namni erga tawbatee booda sababoota karaa qajeelaa irratti isa gargaaran ni ilaalla.
5-Hiriyyoota babbadoo irraa fagaachu-tarii namni sababa hiriyyaatin badii adda addaa keessa raata’a. Hiriyyaan isaa wanta badaa san waan hojjatuuf innis duuka bu’uun baditti marqama. Abu Muusan (RA) akka gabaasetti Nabiyyiin (SAW) akkana jedhan “Fakkeenyi hiriyyaa gaarii fi badaa akka nama miskii baadhatuu fi buufaa cimdii afuufuti. Namni miskii baadhatu yookaa akka kennaatti shittoo siif kenna yookin isarraa bitta yookiin immoo foolii gaarii isarraa argatta. Garuu namni buufaa cimdii afuufu yookaa uffata kee guba yookin immoo fooli badaa isarraa argatta.” Sahih al-Bukhari 5534
March 26, 2019 Sammubani Leave a comment
Namni jireenya dogongoraa jiraacha erga turee yommuu ifti beekumsaa isaaf ifu tawbachuun jireenya gammachuu jiraachu barbaada. Akkuma ifti beekumsaa isaaf ifuun hojiin isaa badaan garmalee isatti fokkataa adeema. Tawbachuun wanta isa darbe bakka buusuf carraaqa. Ibaada adda addaatin of ko’oomsun garmalee hojjata. Garuu, yeroo tawbatuu fedhiin cimaan inni argate akkanatti itti hin fufu. Fedhii cimaa booda laafinni ni dhufa. Kanaafu, namni yeroo kanatti maal gochuu qabaa? Gaafii fi deebiin armaan gadii kanaaf furmaata ni ta’a jedheen abdadha.